“Ha iloobin in aad saacada badasho” | Somaliska
“Ha iloobin in aad saacada badasho”
Saacada ayaa laga jaraa Habeenka Axada ugu dambeysa ee bisha Oktobar taasoo ku beegan 30,Oktoobar, 2011 ayadoo marka saacada ay tahay 3:00pm laga dhigi doono 2:00pm.
Arintaan ayaa aad muhiim ugu ah in ay ogaadaan dhamaan dadka ku nool Sweden ayadoo tani saameen wayn ku yeelanayso saacadaha shaqada, iskuulada , tareenada iyo dhamaan qaybaha nolosha.
Barnaaminka MSN oo la xirayo
Asc, waa ku mahadsan tahay Jimcaale xusuusinta aad nasoo xusuusisay saacada inaan jarno. Waxaa nagu dhici lahayd meel walba oo nalaga rabo inaan 1-saac dib u dhaca ka sameyno marka wax weyn ayay noo tahay inaad dib noo xusuusiso 1saac oo wax badan aan ku lumin karney. Maadama aan ka nimid wadan ay saacadiisu isbedelinba kkkkkkkkkkkk.
Halkaas kasii wada waxqabadka bulshada walaalkiis.
Mahadsanid jimcaale adiga iyo bahda somaliska runtii howla fiican waaye in lees xusuusiyo saacada waxaan hubaa in dad badani aysan lasocn laheen ‘Good jobb’
walaal wad ku mahadsan tahey laakiin axada bisha waa 30.taas xasuusnow.
saacada hadii lajaro macnaha waxaalaga dhigaa miyaa meeshi 24- timmar ka eheed 23 timm,, oo mugaas saa lagu helaa saacadaan maqan?
mahad sanid somaliska xusuusinta saacada waxaa kaloo usheegtaa in cimriga sidaas usocdo halagu dadaalo taqwada ilaaheey ilaaheey hana cafiyo aduun iyo aakhirabo
October 29, 2011 at 22:12
oo ani anoo laafiyoon tagi lahaa meeshi shaqadee 3saace meeshi 7,30 layga rabee
waa ku mahadsanatahay walkeey jimcaale madama aad na xasuusisay in sacada la badalaayo
October 30, 2011 at 13:19
somaliska waad mahadsan tihin tack tack